အမေးအဖြေကဏ္ဍ « YRIC
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ သို့ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာနှင့်အတူ တင်ရမယ် ပုံစံများကို သိချင်ပါတယ်၊
အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာ ပုံစံ၄(ခ) ဖြစ်ပါတယ်။
အတည်ပြုမိန့် ရရှိပြီးနောက် မည်သို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း?
အတည်ပြုမိန့် ရရှိပြီးနောက်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏သဘာဝ သို့မဟုတ် အခြား ပြဋ္ဌာန်းချက်များအပေါ် မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရ အေဂျင်စီ များနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများထံမှ လိုင်စင်များ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်များ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် အတည်ပြုချက်များ၊လိုင်စင်များ၊ ခွင့်ပြုချက်များ၊ ဖက်စပ် လုပ်ငန်း သဘောတူညီချက်နှင့် မြေငှားသဘောတူညီ ချက်များအားလုံး၏ မိတ္တူ၅စုံ ကိုကော်မရှင်သို့တင်သွင်းရမည်။
မည်သည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများက နိုင်ငံခြားသား ရာခိုင်နှုန်းပြည့် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသလား?
ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရာတွင် အနည်းဆုံး လိုအပ်သည့် ရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်မှုရာခိုင်နှုန်း အချိုးသတ်မှတ်ချက် ကိုသိရှိလိုပါသည်?
ကော်မရှင်၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၁၇အရ နိုင်ငံခြားသား ၈၀%နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၀% ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော သစ်ကုန်ကြမ်းကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့် ရှိပါသလား?
သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၁၀၀% ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိပါသလား?
မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် ကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန့်ရယူရန် မည့်သည့်စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါသလဲ?
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း စာချုပ် များ၊ Inspection Certificate၊ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု ရာခိုင်နှုန်း၊ နည်းပညာ အသုံးပြုမှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်နှင့် အသုံးပြုခွင့်ရရှိကြောင်း အထောက်အထားများ တင်ပြရန်လို အပ်ပါသည်။
မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကော်မရှင်မှ မည်သည့်စနစ်ဖြင့်လက်ခံဆောင်ရွက်ပါသလဲ?